वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी समृद्ध हुने ? वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी समृद्ध हुने ? - Akhabar Nepal
वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी समृद्ध...
वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी समृद्ध हुने ?
२०७६, १७ असार मंगलवार १४:५३
नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद्द्वारा वर्ष २०७४ को नवलरासी जिल्लाकै उत्कृष्ट युवाको रुपमा पुरस्कृत, चौथो दक्षिण एशीयाली ज्योतिष महासंघ, ज्योतिष तथा वास्तु सम्मेलनमा ‘ज्योतिष भुषण’ अवार्ड प्राप्त, सिङ्गापुरबाट सर्बोत्कृष्ट गीतकारको अवार्ड प्राप्त पेशाले सिभिल इन्जिनियर भई थुप्रै विधासँग आबद्ध हुनुभएका कात्तिक लक्ष्मीपूजाको दिन माता सावित्रा सोती र पिता बाबुराम सोतीको कोखबाट कुन्छा, लमजुङ्गमा जन्म भई एक सफल व्यक्ति, गीतकार, कवि, ज्योतिष, वास्तुविद्, मानवअधिकारकर्मी लक्ष्मीप्रसाद सोतीसँग वास्तु र इन्जिनियरिङ्को विषयमा आधारित रहेर गरेको कुराकानी:
– तपाइँ ‘एस्ट्रोमहावास्तुविद्’ हुनुको नाताले हाम्रा शुभचिन्तकहरुलाई केही वास्तुका जिज्ञासाहरु मेटाईदिनुस् न ?
वास्तु भनेको एक इनर्जी साइन्स हो, विदेशहरुमा यसलाई विज्ञानसँग जोडियो सबैले फलो गरे, नेपालमा बढी धर्मसँग जोडियो त्यसैले धेरै महत्व पाएन । यो २१औं शताब्दीको वैज्ञानिक युग हो तसर्थ वास्तुलाई वैज्ञानिक तरिकाले अघि बढाउनुपर्छ । वास्तु भनेको एक थम रुलको आधारमा समेटिएको सार हो भने महावास्तु भनेको वास्तुकै इडिट भर्जन अर्थात वैज्ञानिक युगमा वैज्ञानिक तरिकाले रिसर्च, केस स्टडी गरी पत्ता लगाईएको सुक्ष्म डिग्रीहरुलाई पनि समेटिएको फरमुला हो । एस्ट्रोमहावास्तु भनेको व्यक्तिको चिना र घरको नक्सालाई एकैठाँउमा जोडिएर बनाईएको सुक्ष्म विश्लेषण सहितको विज्ञान हो । जीवनमा सुख, शान्ति, धेरै पैसा कमाउन, अवसर प्राप्त गर्न, विभिन्न रोगहरुको निदान गर्न, राजनीतिक सफलता, पढाई, फजुलखर्चबाट जोगिन, डिप्रेसन, आफु लागेको पेशामा आफु राजा बन्न एस्ट्रो महावास्तुको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको हुन्छ । म भारतमा एस्ट्रो महावास्तुको अध्ययन गर्दा कक्षामा स्पेन, चीन, अमेरिका, क्यानडा, केरियाका थुप्रै इन्जिनियर, डाक्टर, सीए साथीहरु थिए, त्यसपछि मात्र मैले बुझें यो वास्तु र ज्योतिषको महत्व नभएको देश अरुभन्दा नेपाल नै रहेछ । विदेशमा वास्तुविना त संरचनाहरु नै बन्दारहेन छन् । घरको वास्तु हेर्दा घरको नक्सा, व्यक्तिको जन्म मिति, समय र स्थान, गुगल म्याप को आधारमा त्यो घरमा पञ्चतत्वको मात्रा के-कति छ, नेगेटिभ पोजेटिभ एक्टीभिटी के छ सोको आधारमा बार चार्टमा घरको इनर्जी प्लट गरिन्छ र समस्याहरुको खोज गरी समाधान गरिन्छ ।
– नेपालमा भन्दा विदेशमा वास्तुशास्त्रको झनै महत्व रहेछ भन्नुभयो, यसमा सबै नेपालीले पत्याउने आधार के छ ?
हो नेपालमा भन्दा विदेशमा वास्तुशास्त्रलाई कयौं गुणा बढी महत्वका साथ हेरिन्छ । सबैले बुझ्ने आधार र प्रमाण भनेको यो इन्टरनेटको जमाना हो गुगलमा सर्च गरेर हेरौँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लाखौ जनताको अगाडी वास्तुशास्त्रको महत्वको बारेमा भाषण गरेका छन्, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफै वास्तुशास्त्रको सहयोगबाट मेरो ट्रम्प टावरको विजनेसमा अधिक सफलता मिल्यो भनेका छन् । नयाँ ठुलो कामहरु गर्दा वास्तुको सल्लाहमा काम गर्छन् । ट्रम्पका वास्तु सल्लाहकार Yin Yang भन्ने एक महिला छिन् । विकासमा धेरै फड्को मारिसकेका सिङ्गापुर, हङ्कङ्, शहरहरु वास्तुको नियमलाई पालना गरेर बनाइएको छ । यी कुराहरु मैलेपनि इन्टरनेट ट हेरेर थाहा पाएको हो, गुगल युटुवमा प्रष्ट छ ।
– के वास्तुको प्रयोगबाट विरामीहरुको उपचार सम्भव छ ?
सम्भवको कुरा छाडौँ म आफैले घर, अफिस, फ्याक्ट्रीको वास्तु चेक गरेर थुप्रै विरामीहरु ठिक भएका छन् । क्यान्सर, मुटुको रोग, ढाड दुख्ने, दम, दुर्घटना आदि अवस्था हेरेर वास्तुसँग मेल भएकै हुन्छ र यी रोगहरु घरको वास्तु मिलाएरै निको भएका छन् । केही मान्छे डिप्रेसनको सिकार हुनु, आत्महत्या गर्नुमा वास्तुको पनि प्रभाव रहन्छ । जस्तै कसैको घरको दिशाहरु मध्ये West North west घरको Center बाट 22.5º पश्चिमको भागको ठिक उत्तर भागमा जो व्यक्तिको सुत्ने बेड छ उ 100% डिप्रेसनको सिकार हुन्छ । मानिसमा कुन रोग लागेको छ त्यो रोगसँग सम्बन्धित घरको जोन कुन हो त्यहाँ असन्तुलन भएको छ की, पञ्चतत्वको सिद्धान्त विपरित छ त्यही अनुसार फल प्राप्त हुने हो ।
– घरमा वास्तु नमिलेकै कारण कसरी मान्छेलाई क्यान्सर हुन्छ ?
जसरी घर बनाउँदा विभिन्न सामाग्रीको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी मानिसको शरीर असंख्य स-साना कोषले बनेको हुन्छ हरेक कोषिकाको आफ्नै जिवनचक्र हुन्छ । जसरी मान्छेको जन्म पछि मृत्यु हुन्छ । त्यसरी नै सबै कोषिकाको एक समयमा मृत्यु हुन्छ । कोषिकाको जिवनशैलीलाई प्रकृतिले हो सन्तुलनमा राख्ने जसले गर्दा अनियन्त्रित तरिकाबाट बृद्धि हुँदैन र प्रकृतिको नियम अनुसार चल्छ । यसरी परिवर्तन भएका कोषिका अनियन्त्रित रुपमा बृद्धि हुनु, गाँठो वा ट्युमर बन्नु नै क्यान्सर हो वास्तुशास्त्र अनुसार घरको सेन्टरबाट उत्तरपूर्वको 22.5º तर्फ North East दिशामा Toilet छ भने क्यान्सर रोग उत्पन्न गराउँछ । उत्तरपूर्व जलको दिशा हो, दिमाग स्वच्छताको जोन हो । हाम्रो दिमागको प्रोग्रामिङ्ग भाषा सब कन्सियस माइन्ड अनुसार यसको गुणधर्मका आधारमा सिम्बोल वेव आकारको, रङ्ग निलो र कालो हुन्छ । शौचालय एक डिस्पोजल एक्टीभिटि हो । जुन पृथ्वी तत्व हो, पहेलो रंग हो र सब कन्सियस माइन्डको भाषाले वर्गाकार रुपमा बुझ्छ ।
जब पृथ्वी तत्व जल तत्वमा प्रवेश गर्दा पृथ्वी तत्वले उत्तर पुर्वको जल तत्वलाई रोक्न खोज्दछ र घामबाट निस्कने परावैजनी किरणमा स्ट्रेस पर्न जान्छ तसर्थ पृथ्वी तत्वमा भएको सुक्ष्म स्थलहरुमा प्रवेश गरी त्यसको मेलमा बृद्धि गराँउछ फलस्वरुप क्यान्सर हुन्छ । उत्तरपूर्वमा शौचालय भएमा क्यान्सर हुन्छ तर ठ्याक्कै उत्तर पुर्वको 22.5º को भाग हो होइन भनेर ठम्याउन कम्पासको प्रयोग गरेर मात्र सुनिश्चित हुन सकिन्छ । उत्तर पूर्वको योजोनमा शौचालय छ भने वन्द गर्नुको विकल्प छैन तर अन्य संरचनाहरु भने वास्तु विग्रेमा विना तोडफोढ उपचार गर्न अथवा मिलाउन सकिन्छ ।
– यो यात्रा र सफलतासम्म आईपुग्दा तपाईको सबैभन्दा नमिठो क्षण केही छ ?
यो प्रश्नमा मेरो अलि पृथक उत्तर छ । म हाल नवलपुर जिल्लाको गैडाकोट नगरपालिकामा विगत ७ वर्षदेखि घर नक्सा पास शाखामा कार्यरत छु । नयाँ घर बनाउदा नगरपालिकाबाट नक्सापास गरेर मात्र बनाउनुपर्छ । नेपाल सरकारको नियम अनुसार हामीले नक्सापास गर्दा चेकगर्ने भनेको घर नक्सा भुकम्प प्रतिरोधात्मक तरिकाले डिजाईन गरिएको छ/छैन, बाटोको मापदण्ड आदि मात्रै हो । जब मेरो टेबलमा नक्सा आउँछ अनि हेर्छु कुनै घरहरु वास्तुको सिद्धान्त भन्दा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ तरपनि नेपाल सरकारको नियम अनुसार भूकम्प प्रतिरोधात्मक आदिमा नक्सा ठिक भएपछि फाइल अघि बढाउनुपर्छ । त्यो क्षण नै मेरो लागि दुःखको क्षण भइदिन्छ, मनमा खिन्नता हुन्छ । जब वास्तु नमिलेको घरको नक्सा पास गर्नुपर्छ ।
– वास्तुशास्त्र अनुसार कसरी धेरै पैसा कमाउने ?
सबैको मुख्य चासोको प्रश्न सोध्नुभएकोमा यहाँलाई धन्यबाद । वास्तुशास्त्र अनुसार घरको ३ विधालाई मिलाएमा धन कमाइन्छ । पैसा कमाउन मुख्य ३ चिज आवश्यक हुन्छ जसमा एक अवसर प्राप्त हुनुपरयो, दोश्रो कारोवार हुनुपरयो तेस्रो बचत हुनुपरयो । घरको ठिक उत्तरतर्फको 22.5º जोन याक्टीभ भएमा अवसर प्राप्त हुन्छ । व्यापार विजनेश छ भने ग्राहकहरु बढ्छन् यसको लागी उत्तर दिशामा पहेँलो र रातो रंग हुन भएन निलो वा कालो रंग हुनुपरयो । शौचालय,भान्छा घर हुनुभएन । पानी हुनुपरयो । अब ग्राहक आउँदैमा धन आउने होइन कारोबार हुनुपरयो । त्यसको लागि घरको पुर्व दक्षिण (South East) जोन याक्टीभ हुनुपरयो । त्यहाँ भान्साघर भएमा उत्तम । रातो कलर हुनुपरयो, निलो हुनुभएन । त्यो दिशामा पानीको स्रोत हुनु भएन । एैना राख्नुभएन, बाहान उल्लु समेत भएको महालक्ष्मीको फोटो राख्दा झन राम्रो । कारोबार ज्यादा हुँदैमा हुँदैन बचतको जोन राम्रो हुनु पर्यो । अब तेस्रो जोन West (पश्चिम) जोन याक्टीभ हुनुपरयो, त्यो आकाश तत्व हो । सेतो कलरको हुन्छ सव कन्सीयस माइन्डले बुझ्ने सेतो रंग गोलो आकार हो, त्यहाँ विष्णु भगवानको फोटो राख्दा राम्रो पश्चिम दिशामा रातो र हरीयो कलरहरुका ठुला सामानहरु हुन भएन । शौचालय हुन भएन यसरी घर, पसल, फ्याक्ट्रीमा यी ३ जोनको वास्तु मिलाएमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ ।
– यो ज्योतिष शास्त्र, चिना, चल्दा दशाहरु भन्छन्नी के हो त्यो ?
चिना भनेको हाम्रो घरजग्गाको नापी नक्सा भएजस्तै हाम्रो जिवनको नापी नक्सा हो । ज्योतिष शास्त्रले हाम्रो उमेरको चलिरहेको समयमा कहिले के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने बताँउछ । यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जिन्दगीको बलियो पल र कमजोर पक्षलाई औलाएर सोही अनुसार मार्ग निर्देशन गर्नु हो । ९ ग्रह, १२ राशी र १२ भावको आधारमा काम गरिन्छ । मानौ एउटा रेल हिड्ने आफ्नै तोकिएको बाटो हुन्छ सुरुबाट अन्त्यसम्म पुग्दा उसले आफ्नो लिग छाड्दैन तर थुप्रै स्टेशनहरुमा रोकिदै चल्छ । यसरी नै हाम्रो जिन्दगीका स्टेशनहरुलाई महादशा अन्तरदशा आदि भनिन्छ । हाम्रो जिन्दगीको बाटोमा शुक्रग्रह २० बर्ष, शनि १९ वर्ष, बुध १७ वर्ष, सुर्य ६ वर्ष यसरी नै सवै ग्रहहरु चलिरहेको हुन्छ ।
– वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित यहाँले गर्नुभएको केही कामहरु बताइदिनुस् न ।
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जस्तै क्यान्सर, मुटुको रोग आदि केसहरु लिएर समाधानको लागि आउनुहुन्छ । जिन्दगीमा पैसा कमाउन नसकिएका केसहरु, पारिवारिक झै-झगढा, छोराछोरीको पढाई एवं स्वास्थ्यका समस्या, अफिस, फ्याक्ट्रीमा राम्रो आम्दानी नभएका केसहरु, विजनेस घाटाका केसहरु धेरै आउँछन् अनि वास्तुशास्त्र अनुसार घर, अफिस, फ्याक्ट्रीका नयाँ नक्साहरु बनाउन पनि उत्तिकै आउनुहुन्छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा विवाह पश्चात परेको डिप्रेशन केस आएको थियो र सोको समाधान समेत भैसकेको छ । म आफुले डिजाइन गर्ने घरहरु वास्तुशास्त्र अनुसारको भुकम्प प्रतिरोधात्मक गर्ने गर्छु ।
– तपाई आफै इन्जिनियर भएको नाताले भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउँदा विचार पुरयाउने कुराहरु के-के हुन् ?
सर्वप्रथम दक्ष प्राविधिकहरुबाट भुकम्पप्रतिरोधात्मक घरको नक्सा डिजाइन गर्नुपरयो । अनुभवी ठेकदारको छनौट गरी निर्माण अवधिभर प्रविधिकहरुबाट सुपरिवेक्षण गराउनुपरयो जग्गाको छनौट, प्रविधिक छनोट, निर्माण स्थलको माटोको पहिचान तथा जग निर्माण, घरको प्लान तथा आकार प्रकारको निर्धारण मिलाएर, विमको साइज डण्डी काट्ने र बाँध्ने तरिका, निर्माण सामाग्रीको छनौट, कंक्रिट मसलाको क्वालीटी कन्ट्रोलहरुमा अलि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मेरो १ जना इन्जिनियर साथीले फेसवुकमा एउटा स्टाटस राख्नुभएको थियो कि कसैलाई गाली गर्नुपरयो, दुःख दिनुपरयो भने घर बनाएस् भन्दिनु रे यसको मतलब घर निर्माण गर्ने काम एकदमै ध्यान पुरयाएर खटिएर गर्नुपर्ने गाह्रो काम हो । तसर्थ वास्तुशास्त्रको अनुसारको भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाएर ढुक्कसँग आनन्दित तरिकाले जिवन यापन गर्नुपर्छ ।
– नेपाल भुकम्पको हिसाबले कत्तिको जोखिमको देश हो ?
नेपाल भुकम्पीय जोखिमको हिसाबले इन्डियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेटको बिचमा अवस्थित एकदमै असुरक्षित मुलुक हो । प्रत्येक वर्ष २ से.मी.का दरले धसिरहेको २ प्लेटको सम्पर्क विन्दुमा शक्ति संचय भइरहन्छ र संचित शक्ति धेरै भएको अवस्थामा विस्फोट भई भुकम्प उत्पन्न हुन्छ । प्लेटको बाउन्ड्रीको विस्फोट हुने बिचको भागलाई फल्ट भनिन्छ र यस्ता क्षेत्रहरु नेपालमा ९२ वटा सक्रिय फल्टहरु छन । विगत दुई सय वर्षदेखि नेपालको पश्चिमी भागमा कुनै ठुलो भुकम्प गऐको छैन । नेपालमा प्राय प्रत्येक ४० वर्षको अन्तरालमा ७.५ देखि ८ रेक्टर स्केल तथा प्रत्येक ८० वर्ष को अन्तरालमा ८ रक्टर स्केल भन्दा वढीको भुकम्प गइरहन्छ । भुकम्पीय हिसावले धेरै जोखिममा छौँ हामी त्यसैले भुकम्प प्रतिरोधात्मक सुरक्षित घर वनाउन जरुरी छ ।